ICalcium Zinc Stabilizer, isiQinisi seKhompawundi, Isiguquli sempembelelo- iHualongyicheng
Jonga eyethu Iimveliso eziphambili
I-Hualongyicheng ikunika yonke into oyifunayo kwinkqubo ekhuselekileyo nenempumelelo yokuvelisa.
Imibhobho yokuNikezelwa kwaManzi ye-PVC
Ukuqiniswa kweeMveliso zePVC eziQinisekileyo
Uncedo ngokubanzi lwePVC
Silelona khetho lilungileyo kuwe
E-Hualongyicheng iTeknoloji eNtsha yeZinto, abantu bethu baqhutywa ziiLungiso zoMgangatho oPhakamileyo, iNkonzo yaBaxumi abaPhambili, ubuGcisa kunye nokuthembeka. Asifuni nje abathengi ukuba bathenge iimveliso zethu; Sifuna ukubanceda bafumane elona xabiso kwiimveliso.
Ikomkhulu laseGuangdong, China, iHualongyicheng inabasebenzi abangaphezulu kwe-100 kwihlabathi liphela kunye neZiko leMveliso kunye neR & D, eligubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-10,000. Zonke izongezo zethu zithobela imigangatho ye-SGS kunye ne-EN71 kwaye ziye zamkelwa ngomgangatho owamkelweyo kwilizwe liphela we-ISO14001: 2004.
Amaziko ethu eeNkonzo zokuThengisa emva koku eVietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia, Nigeria, njl.
Siza kuqinisekisa ukuba uhlala ufumana i-
Impendulo entle evela kubathengi bethu yenye yeendlela zethu zokuqhuba.
Ukuqeqeshwa rhoqo kubuchwephesha kubasebenzi bethu kuqinisekisa eyona mveliso ilungileyo.
Amava okuvelisa avela kwimveliso eyahlukeneyo yePVC asigcini phambi kwegophe.
Izongezo zethu zePVC ziye zithunyelwa eYurophu, eAfrika, eMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, eMntla Melika, eMzantsi Melika njalo njalo.
INTONI ABANTU BATHI
Xu Weizhao UMongameli kwiQela lamaShishini eRifeng
UHualongyicheng uliqabane eliqeqeshiweyo. Iimveliso zabo kunye nenkonzo zisincedile ekuveliseni iimveliso zePVC ezisemgangathweni kwaye zisombulule uninzi lweengxaki ezinxulumene nemveliso. Enkosi.
UZhu Liquan Usekela Mongameli kwiQela le-Weixing
Umboneleli wempahla yePPP yomthengisi okhethiweyo esiyikhethileyo kumakhulu. Benza umsebenzi olungileyo ukusukela ngala mhla wokuqala.
UDing Langyu Umphathi Jikelele kwiZhongcai Imibhobho
Inkonzo iHualongyicheng isibonelela ngowona mgangatho uphezulu. Zithembekile, zithembekile kwaye ziyile. Andiyi kuthandabuza ukusebenzisana nabo kwiiprojekthi ezizayo.
Ukususela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu uphuhlisa iimveliso zodidi lokuqala lwehlabathi ngokubambelela kumgaqo wobulunga kuqala. Iimveliso zethu zizuze igama elihle kwishishini kwaye zibalulekile phakathi kwabathengi abatsha nabadala ...
I-HLYC ibalaselisa ukuGxila kwayo kuZinzo ngo-2020
I-HLYC ibhengeze uPhuhliso oluPhumeleleyo lweFomula yeFomula yePVC